संपादकीय « Phidim Today
पहाडी जिल्लाका ग्रामिण सडकहरु बर्खा लाग्ने वित्तिकै अवरुद्ध हुन्छन् । जथभावि निर्माण गरीएका सडकका कारण गुणस्तरमा ख्याल नदिदा अधिकतर सडक विग्रिएका छन् भने जोखिम समेत बढाएका छन् । बर्खालाग्ने बेला
याङवरकबाट केही सिक्ने हो की ?
पछिल्लो साता पाँचथरको याङवरकमा भएको कार्यक्रमले जिल्लाबासीलाई नयाँ सन्देश दिएको छ । यस अवधिमा गाउँपालिकाको कार्यक्रमबाट केही सिक्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाले जिल्लामा पहिलो पटक प्रथम
स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउ
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्रै बार्षिक अरवौ रकम खन्याउँछ । बजेट मात्रै गन्ने हो भने पनि ठुलै हुन आउँछ । तर तिनको सदुपयोगको अवस्था कस्तो छ ? कही कतैबाट सोधीखोजि
नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा लिएको छ । भ्रमण बर्षको सन्र्दभमा विभिन्न अपेक्षाहरु रहेका छन् । निक्कै महत्वकाक्षी लक्षहरु रहेका छन् । त्यसोत हाम्रो समाजमा घुम्ने
कफीको ब्यवसायीक उत्पादनका लागि पाँचथर जिल्ला उर्वर क्षेत्र मानिन्छ । जमिन मात्रै उर्वर भएर कफी बिकास हुँदैन । पहिलो बिषय लगानीको हो । लगानी अवस्यक मात्रामा पुर्याउन सके कुनै समस्या
सम्पादकीय पाँचथर जिल्ला पर्यटन, जलबिद्युत सहितका सम्भावना भएको क्षेत्र हो । जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिकाको सिदिन गाँउमा मात्रै सात ओटा लघु जलविद्युत् सञ्चालनमा छन् । विभिन्न संघ संस्थाको अनुदान सहयोग र
केही सातायता नेकपामा एउटा बहस चलेको छ– नेकपाको गर्भाधान हुने क्रममा त्यसका एक्स र वाई क्रोमोजोमको मिलानको समयमा एउटाले अर्कालाई झुक्याएको अर्थ लाग्ने गरी उठेको नेकपाको सिद्धान्तको विषयमा । पार्टीका एकथरी
पछिल्लो समय सामुदायीक बिद्यालयमा अपनाइदै आएको अंग्रेजी शिक्षालाई समस्या मान्न थालिएको छ । बिश्वब्यापी भाषाका रुमा बिकास हुँदै आएको अंग्रेजी भाषा आफैमा समस्या हैन । एउटा उदाहरण हेरौ–शिक्षा पत्रकार समुहको
समयमा सचेत बनौ
समयमा ध्यान दिन नसक्दा पाँचथरको एउटा हाइडोपावर आयोजनाले समस्या भोग्नु परेको छ । माउन्टेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पाँचथरमा निर्माण गरेको तल्लो हेवा खोला ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा
पत्रकार चाहेको की चाकरीवाज ?
पत्रकारिता भन्नाले सत्य तथ्य घट्नाहरुमा अधारित रहि संचार माध्यमबाट आम नागरिकलाई जनकारी गराउनु नै पत्रकारिता हो । आजको युग बिज्ञानको युग हो । बिश्वमा घटेका हरेक घट्नाको जनकारी र बिबरण